Ityala elitsha leebhetri zeemoto zamandla ebhetri-iXuzhou Hanyu Aluminium Industry Co, Ltd.
Ityala elitsha lebhetri yesithuthi se-aluminium
1. Iqokobhe lealuminiyam yebhetri yemoto entsha inamandla aphezulu, imodulus ethile, ukuqina kobushushu, amandla okukhathala kunye nokuqina kokuqina kwento. Ngenxa yokuba izinto ze-aluminium alloy zinobunzima obuphantsi, ayinamandla ombane, ialloy izinzile kumaqondo asezantsi, ukumelana ngokuthe gabalala kumandla omazibuthe, ukuqina komoya, kunye nokungena ngokukhawuleza kwamandla ombane okwenziweyo.
2. Unyango oluphezulu lwebhetri yealuminiyam yebhetri ikakhulu lutshiza ngombane, kwaye umbala wayo ucebile kakhulu. Imibala yayo ihlala imhlophe-grey, imnyama grey, mnyama, kwaye iluhlaza okomkhosi.
3. Ityala le-aluminium yebhetri inezibonelelo ze-aluminium alloy, kwaye iyakhanya kwaye yomelele xa ibunjiwe.
4. Ityala le-aluminium yebhetri lithe ngxi ngeplastiki, kwaye ukuveliswa kwayo kungcono kunezinye iiprofayili, kwaye ikwanakho nokubekeka kakuhle, ke oko kuneenzuzo ezilungileyo zokuvelisa.
5. Ityala le-aluminium yebhetri liya kusetyenzwa ngeenkqubo ezishushu nezibandayo. Ityala le-aluminium yebhetri elenziwa ngale ndlela liya kuba nokuxhathisa okomeleleyo. Ngenxa yoko, ibhetri ye-aluminium yebhetri ikhusela ngakumbi.
6. Eli qokobhe lealuminiyam likwanakho nokusebenza okuhle, okunokwenziwa kwisibambiso esikhanyayo ngezinto ezininzi zesinyithi, kwaye impahla ilula. Iipropathi zayo zeekhemikhali zizinzile, azina-magnethi, zinokuphinda zisetyenziswe ziphinde zisetyenziswe kwakhona, kwaye zizinto zentsimbi ezinokuphinda zisebenze kwaye zinokuphinda zisebenze. Kwaye uxinano oluncinci, ukuthungwa okukhanyayo, ngowona mdlalo ufanelekileyo kwizithuthi zamandla amatsha.